इसीमाना सम्वाददाता बीरगंज १८ भदौ २०७७ 219 पटक पढिएको
तस्विर /जाकीर हुसेन
वीरगञ्जमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका ब्यक्तिहरुले ‘प्लाज्मा दान’ गरेका छन । कोरोना भाइरसको संक्रमणमा परेका ब्यक्तिलाई प्लाज्मा थेरापीका लागि ‘प्लाज्माको आवश्यकता पर्छ त्यही आवश्यकता पूर्तीकालागि बीरगंजमा प्लाज्मा दान गरिएको हो ।
‘प्लाज्मा दान गरौं, कोरोना संक्रमितको ज्यान बचाऔं’ भन्ने नाराका साथ आयोजित प्लाज्मा दान कार्यक्रमा कोरोना संक्रमण निको भएका ५ जनाले प्लाज्मा दान गरेको डा. उदयनारायण सिंहले बताउनु भयो ।
नागरिक सरोकार समाज वीरगञ्ज, नारायणी अस्पताल प्लाज्मा थेरापी स्टडी ग्रुपको आयोजना भएको कार्यक्रममा वडाध्यक्ष जगत साह कानु, पत्रकार सुरेश विडारी, डाक्टर प्रहलाद अधिकारी, प्रवेश ढंगेल र खसीकान्त चौधरीले प्लाज्मा दान गर्नु भएको हो ।
दान गरिएको रगतबाट प्लाज्मा निकालेर ‘प्लाज्मा बैंक’मा सुरक्षित राख्ने र आवश्यक पर्दा संक्रमितलाई चढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको डा. सिंहले बताउनु भयो।
गम्भिर अवस्थाका संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापी गर्नुपर्ने हुँदा जरुरी पर्दा दाता खोजेर प्लाज्मा निकाल्न समय लाग्ने भएकोले ‘प्लाज्मा बैंक’ स्थापना गरिएको डा. सिंहको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस पर्साका अध्यक्ष अजय द्विदी, चिकित्सक संघ नारायणी, वीरगंजका अध्यक्ष डा.अरुण सिंह, नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संजय ठाकुर, रेडक्रस पर्सा शाखाका मन्त्री शैलेन्द्र चौधरी, समाजिक अभियान्ता प्रकाश थारु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।